Bodisma teravada - Wikipedia
Ny bodisma teravada na teravada dia endriky ny bodisma izay manakaiky ny bodisma voalohany indrindra ny teravada, manjaka ao Azia Atsimo sy Azia Atsimo-Atsinanana (Srilanka, Tailandy, Kambôdia, Birmania, Laôsy, faritra sasany ao Vietnamy), ny Sinoa ao Indônezia sy ao Malezia ary ny foko ao amin' ny tapany atsimo-andrefan' i Sina. Vao tsy ela akory ny niorenany tao Andrefany raha mitaha amin' ny firehana zen na vajraiana.
Ny foto-pampianarana teravada dia manazava ny fomba atao hidiran' ny tena amin' ny fanafahana amin' ny alalan' ny fiovana ho arahant (olona nafahana vokatry ny fanarahana ny lalana ampianatin' ny Bodà na dia tsy manana ny fahalalana ny zavatra rehetra), ho bodhisattva (olona mikatsaka tokoa ho tonga bodà ka hampianatra amin' ny alalan' ny fanatanterahana ny pāramitā) na ho sambuddha ("bodà tongalafatra", olona izay miditra amin' ny fifohazana sy afaka mampianatra noho ny fananany fahazoana tongalafatra ny fampianaran' i Bodà).
Mitsipaka tanteraka ny fisian' ny Andriamanitra mpamorona sy mahery indrindra izany foto-pampianarana izany. Tsipahiny koa ny amin' ny famonjena azo amin' ny alalan' ny fanoloran-tena sy ny fivavahana amin' ny sisan-javatra avy amin' ny maty. Tsy misy afaka mahazo ny fahazavana ara-panahy avy amin' ny olon-kafa na zavatra hafa tsy ny tena samirery, ny tena samirery no tokony hitady ny marina, ka tokony harahina ny Ariya Aṭṭhaṅgika Magga ("Lalana Valososona Manan-kaja": teny marina, asa marina, fivelomana marina, ezaka marina, fahatsiarovan-tena marina, fifantohana ao amin' ny fifohazana, fomba fijery marina, ary eritreritra marina).
Bodisma mahaiana - bodisma vajraiana - bodisma tibetana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodisma_teravada&oldid=1039009"
Dernière modification le 17 Oktobra 2021, à 07:27
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 07:27 ity pejy ity.